ILR ဗိုလ်မှူးအဖြစ်သင်သိသမျှအရာအားလုံး - ကော်နဲလ်ရှိအကောင်းဆုံးကျောင်း - နှုန်းထားများ
ILR ဗိုလ်မှူးအဖြစ်သင်သိသမျှအရာအားလုံး - ကော်နဲလ်ရှိအကောင်းဆုံးကျောင်း
ကော်နဲလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိကျောင်းတိုင်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်၊ တစ်ခုစီတိုင်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သန့်စင်ထားသော idiosyncrasies များနှင့်လူမှုရေးအရတည်ဆောက်ထားသောပုံစံများရှိသည်။ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အနေနဲ့သင်ဟာအိပ်စက်ခြင်းကိုမသန်မစွမ်းဖြစ်နေပြီးအမြဲတမ်းစိတ်ဖိစီးနေပါတယ်။ Hotelie တစ်ယောက်အနေနဲ့သင်ဟာလက်သုတ်ပုဝါကိုဘယ်လိုခေါက်ရမယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကိုအခန်းတစ်ခန်းကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်။ သို့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ILR ၏အဓိကအရာအဖြစ်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးအနေဖြင့်၊ ILR ကျောင်းတွင်တွဲဖက်ထားသောထိပ်ဆုံးတံဆိပ် ၁၀ ခု - အဓိကနှင့်အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေများရှိသည့်ကျောင်း (ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ပင်ရိုးရိုးသားသားဆိုလိုသည်မှာ) ကိုထုတ်ဖော်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံး… ILR သည်ကျွန်ုပ်စာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ILRie အနေဖြင့်စာမျက်နှာအနည်းဆုံး ၁၀၀ ခန့်သတ်မှတ်ထားခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ တစ်ခုချင်းစီကို နှုန်းသင့်ရဲ့အတန်း၏ သီတင်းပတ် ။ သင်မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ကိုလေ့လာရန်ကြိုးစားသည်။ ပါမောက္ခများကသင့်ကိုချုံ့ရန်တိုက်တွန်းပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်မည်သို့မည်ပုံမသိပါ။ စာဖတ်နေတုန်းမှာတစ်ခုခုပျောက်ဆုံးသွားမှာကိုသင်အမြဲတမ်းကြောက်နေလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းကိုသင်မည်သို့သေချာစွာမဖတ်နိုင်သနည်း အားလုံးအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လား။ ကောင်းပြီ, နောက်ဆုံးမှာအလုပ်ပုံစတင်လိမ့်မည်, သင်အနိုင်နိုင်ကမဆိုပြုလိမ့်မည်။
အထက်တန်းကျောင်းကိုဘယ်တော့မှမဖတ်ဘူး၊ အရာအားလုံးအတွက် Sparknotes ကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်မင်းကံကောင်းတာပဲ
ကံမကောင်းစွာပဲ, Sparknotes မှာဆောင်းပါးတွေများများ၊ သမဂ္ဂများနှင့်အလုပ်သမားများအတွက်ကျပန်းဝတ္ထုများနှင့်တရားရုံးအမှုပေါင်းမိတ္တူများမရနိုင်ပါ။ မင်းစဉ်းစားနေတာမင်းသိလား Shmoop! ကောင်းပြီ, ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်စေအဲဒီမှာမရှိကြပေ။ သင်ရရှိသောဖတ်ရှုမှုအများစုနှင့် (အားလုံးမဟုတ်ပါ) (Jungle သည်ခြွင်းချက်ဖြစ်သည်) အင်တာနက်ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာကြံစည်မှုအကျဉ်းချုပ်မရှိပါ။ ဆိုလိုတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့ပဲလိုတယ်။
မူလစာရွက်စာတမ်းများမှအချက်အလက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့်မှတ်တမ်းများသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်သမားများနှင့်သူတို့၏အခွင့်အရေးများ (သို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏အခွင့်အရေးများ) နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်၏လည်ချောင်းကိုဖြိုဖျက်လိုက်ခြင်းဖြင့်သင်သည် ILR မှအရင်းရှင်ဝါဒနှင့်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုဆန့်ကျင်မည်ကိုသံသယမရှိပါ။ လုပ်အားခကျွန်ဘဝနှင့်ဆိုးဝါးသောစက်ရုံအခြေအနေများအကြောင်းသင်မည်သို့ဖတ်ရှုနိုင်မည်နည်း။ သငျသညျဤဓားပြ Baron, စက်မှုလုပ်ငန်း၏ဤ Titanan ခွင့်လွှတ်နိုင်သလဲ!? သင်မဖြစ်နိုင်ဘူး! ငါသမဂ္ဂများကိုချစ်ပါမောက္ခ Martinez-Matsuda မှကြွေးကြော်ပါ။
'ILR ဆိုတာဘာလဲ?' ဟုလူများစွာကမေးလိမ့်မည်။ အများကြီး ကြိမ်
အလုပ်တစ်ခုရရန်နှင့်အလုပ်ရှာဖွေသူကိုအထင်ကြီးရန်ဓာတ်လှေကားအတက်နှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းအတွက်သာသင်၏ပူပန်မှုကိုသင်ထင်လျှင်၊ မင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုလူတွေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှင်းပြရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်က ILR ဆိုတာမင်းကိုမေးတဲ့အခါတိုင်းလိုင်းအနည်းငယ်ကိုထုတ်ပြီးပြောနိုင်လိမ့်မယ်။ ငါများသောအားဖြင့်ငါသွားလေ့ရှိ၏: သူကအလုပ်ခွင်၏စိတ်ပညာကိုလေ့လာနေနှင့်လူအများစုဥပဒေ, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးသို့သွားပါ။ ဒါဟာအမှတ်ဖြတ်ပြီးရရှိသွားတဲ့။
အလားတူပဲ၊ မင်းကရှေ့နေဖြစ်ချင်သလားမေးလိမ့်မယ်၊ အများကြီး ကြိမ်
ဟုတ်ပါတယ်, ILR ဟာမယုံနိုင်လောက်တဲ့ဥပဒေကျောင်းနေရာချထားမှုနဲ့မောင်းနှင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအငြင်းပွားမှုနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်နာမည်ကြီးပေမယ့် ILR ထဲကလူတိုင်းကရှေ့နေဖြစ်ချင်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်သည်ဤအရာကိုဖတ်ရှုနေပါက၎င်းတို့သည်ဥပဒေပြုရန်လိုလားပါက ILRie အားမမေးပါနှင့်။ လူအများစုကသူတို့ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာတောင်မှမသိကြဘူး။ သူတို့သိရင်သူတို့ပြောလိမ့်မယ်။
အိုင်ဗက်ကိုရုပ်ဆိုးသောအဆောက်အ ဦး အဖြစ်လူသိများသည်
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီဟာတော်တော်လေးစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး၊ Uris ကအဆိုးဝါးဆုံးအဆောက်အ ဦး ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်၊ ငါတို့လာမယ့်တံခါးပေါက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ အိုင်ဗက်သည်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောမျက်နှာများ၊ အခမဲ့ကွတ်ကီးများနှင့်ကျောင်းဝင်းရှိအကောင်းဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် ILR ကလေးတွေကအအေးဆုံး၊ ငါတို့ပါမောက္ခတွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသိတယ်။ သငျသညျသူ့ကိုထက်မဆိုပိုပြီးချစ်ခင်ရင်းနှီးရကြဘူး, ဖြစ်စေတစ်ခုခုကိုဒင်းအကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မကြပါစို့။
ငါတို့ရှိသမျှသည် Catherwood မှာ hibernate
အများဆုံးရှုပ်ထွေးအဆောက်အ ဦ, ဒါပေမယ့်အခြားဆောင်းပါး - Ives ၏စိတ်နှလုံးမှာတွေ့ရှိ Catherwood စာကြည့်တိုက် - ညာဘက်ဒုတိယထပ်တွင်, သင်အထူးသဖြင့် prelim szn စဉ်အတွင်း ILR လူ ဦး ရေတစ်ခုလုံးကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏စားပွဲခုံတွင်အိပ်နေကြသည်၊ သူတို့၏ဆောင်းပါးများကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖတ်ရှုပြီးနောက်ဆုံးမိနစ်စာစီစာကုံးများကိုပုံနှိပ်ဖော်ပြသည်။ သငျသညျအပေါ်ထပ်တစ် cubicle မှာမြေအောက်ခန်းသို့သွားသို့မဟုတ်ချမ်းတုန်ဖြစ်စေ, သင် Catherwood ကိုချစ်ရန်ရှိသည်။
သင်သည် Cornell club fair သို့တက်ရောက်သည့်အခါစိုးရိမ်မှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည့်အခါသင်၏အဓိကကိုထည့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည့်ကလပ်အသင်းအမျိုးမျိုးအတွက်သင်စာရင်းသွင်းမည်။ ခေါင်းဆောင်မှု၊ အငြင်းပွားမှုများနှင့်အစိုးရတို့ကိုဆူညံသောကလပ်များကိုသင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါစာရင်းထဲမှနာမည်အားလုံးသည် ILR ၏ဘေးတွင်ရှိသည်ဟုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ILR သည်ကော်နဲလ်ရှိအနည်းဆုံးကျောင်းများ (၁၆၂ / တန်း) သာဖြစ်သော်လည်းကျောင်းသားတစ် ဦး စီသည်ကျောင်းဝင်းအတွင်းအတတ်နိုင်ဆုံးပါ ၀ င်ရန်သေချာစေပြီး၊ မိမိတို့ကိုယ်ကိုခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အကြီးမားဆုံးသွားလာသူများအတွက်အကြီးမားဆုံးစွမ်းရည်ရှိသည့်ကျောင်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြကြသည်။
ဒီမှာလုံလောက်ပြီ ILRies များသည်တာဝန်ယူမှုနှင့်ကိစ္စရပ်များကိုသူတို့လက်သို့ကိုင်ချင်ကြသည်။ သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ရဖို့ငြင်းခုန်ကြ၊ ကော်နဲလ် အကောင်းဆုံးဟုပြောဆိုခဲ့သည်မှာ ILR သည်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ရှိသောကျောင်းသားများကိုရှာဖွေသည်။
ထို့ထက်ကား ILR သည်အကောင်းဆုံးပါမောက္ခများ၊ ဆရာများနှင့်ကျောင်းသားဟောင်းများကွန်ယက်နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ Ives သို့လမ်းလျှောက်လျှင်သင်ဂရုစိုက်ခံရသည်နှင့်သင်၏ထင်မြင်ချက်သည်အရေးကြီးသည်ဟုခံစားရသည်။ သင်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးသင်ကြားရေးတွင်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည့်ကြီးမားသည့်ခံစားမှုမျိုးရှိသောတက္ကသိုလ်တစ်ခု၏အလွန်သေးငယ်။ စည်းလုံးသောအသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခြင်းသည်ထိုတွင်အကောင်းဆုံးခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ILR တွင်သင့်ကိုအမြဲတမ်းကူညီပံ့ပိုးပေးပြီးသင်၏ပညာရေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုရည်မှန်းချက်များကိုလိုက်စားရန် ILR ကသင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။